Imbali yeYugoslavia - Imbonakalo
IYugoslavia yayikuloo ndawo yaseBalkan yaseYurophu, empuma yeItali .
Kukho iintlangano ezintathu zeentlanga zaseBalkan ezibizwa ngokuba yiYugoslavia. Iyokuqala yavela emva kweemfazwe zeBalkan kunye neMfazwe Yehlabathi. Ekupheleni kwekhulu leshumi elinesithoba, njengoko iimbuso zombini ezazikade zilawulwa kulo mmandla - i-Austria-Hungary kunye nama-Ottomans - zaqala ukuguquka kwaye zibuyela ngokulandelanayo, kwakukho ingxoxo phakathi kwabafundi kunye neenkokheli zezopolitiko malunga nokudalwa kohlanga oluhlangeneyo lwesiSlav .
Umbuzo othi ngubani oya kulawula le nto yayiyimbambano yokubambisana, ngaba yi-Greater Serbia okanye i-Greater Croatia. Imvelaphi yeYugoslavia inokwakhe ihlale kwi-Illyrian Movement ephakathi kwekhulu leshumi elinesithoba.
Njengoko iMfazwe Yehlabathi enye yahlaselwa ngo-1914, iKomidi laseYugoslav lakhiwa eRoma ngamaBalkan ekuthunjweni ukuze ifike kunye nesisombululo sombuzo obalulekileyo: yiyiphi iimeko eza kudala ukuba ii-Allies zaseBrithani, eFransi naseSerbia zaziyo bawunqobe abaseAustro-Hungari, ngokukodwa njengeSerbia bajonga ukutshabalalisa. Ngomnyaka we-1915 ikomiti yathuthela eLondon, apho yaba nefuthe kwizombusazwe ezihlangeneyo kakhulu kunokuba ubukhulu bayo. Nangona ixhaswa ngemali yaseSerbia, ikomidi-eyayiquka ikakhulukazi iServenes kunye neCroats-yayibhekisana ne-Greater Serbia, kwaye yathi i-union elinganayo, nakuba bevuma ukuba njengeSerbia yaba yindawo ekhoyo, kwaye leyo inexhobo zokusebenza karhulumente, Isizwe esitsha saseSlav saseMzantsi Afrika kufuneka sidibanise ngeenxa zonke.
Ngomnyaka we-1917, iqela elincintisanayo laseSouth Slav lenziwa ngamagosa aseburhulumenteni base-Austro-Hungarian, ababemelana nomanyano wamaCroats, iSlovenes, namaSerbia kwiminyaka esanda kuphinda iqhutywe, kunye ne-federated, e-Austria. Ikomiti yeSerbs neKomiti yeYugoslav yaya phambili, isayina isivumelwano sokunyanzelisa ukudala uBukumkani obuzimeleyo beSerbs, iiCroats kunye neSelven phantsi kookumkani baseSerbia, kuquka nomhlaba okwangoku e-Austria-Hungary.
Njengoko ukugqitywa kokugqibela phantsi kweengcinezelo zemfazwe, iBhunga leSizwe lamaSerbs, Croats, kunye neSloven lalivakaliswe ukulawula i-Austria-Hungary, yangaphambili yamaSlav, kwaye le nto yabangela ukuba inyunyana neSerbia. Esi sigqibo sithathwe ngaphandle kwenxalenye encinci ukukrazula iindawo zokuhlawulela amaTaliyane, ama-Deserters kunye namajoni eHabsburg.
Iibambisene ziyavuma ukuveliswa kwelizwe laseSlav kwaye zixelele ukuba amaqela angamaqhinga athile. Iingxoxo zalandelwa, apho iBhunga leSizwe linikezela kwiSerbia kunye neKomiti yeYugoslav, ivumela iNkosana uAleksander ukuba ivakalise ubukumkani bamaSerbia, iiRokethi kunye neSloven ngomhla kaDisemba 1, 1918. ngumkhosi, kwaye ukuxhatshazwa krakra kwakudityaniswe phantsi phambi kwemida, kwakhiwa urhulumente omtsha ngowe-1921, kwaye umgaqo-siseko omtsha wavotelwa kuwo (nangona okokugqibela kwenzeka emva kokuba amaninzi amaninzi aphuma echasene.) Ukongeza , ngowe-1919 iqela lamaKhomanisi laseYugoslavia lakha, lafumana inani elikhulu lamavoti, lavuma ukujoyina ikamelo, lenze ukubulawa kwaye lavalwa.
Iminyaka elishumi yezopolitiko phakathi kwamaqela amaninzi ahlukeneyo, ngokuyininzi ngenxa yokuba ubukumkani bulawulwa yiSerbs, abaye banandisa izakhiwo zabo zokulawula ukuba bawuqhube, kunokuba nantoni na entsha.
Ngenxa yoko, uKumkani uAleksander Ndivalile ipalamente waza ndadala ulawulo lobukhosi. Wabiza igama elithi Yugoslavia, (ngokoqobo ngokuthi 'umhlaba weeSlave zaseMzantsi Afrika') waza wenza izigaba ezintsha zengingqi ukuze azame ukungafuni ukunyanelana. UAlexandro wabulawa ngo-Oktobha 9, 1934 ngelixa ehambela iParis, ngo- Ustasha . Oku kwashiya iYugoslavia ilawulwa ngu-regency kwiNkosana iPeter uPetar oneminyaka elishumi elinanye.
IMfazwe kunye neYibini Yugoslavia
Le Yugoslavia yokuqala yaya kwada kwaphela iMfazwe Yehlabathi yesiBini , xa amabutho aseAxis ahlaselwa ngo-1941. I-Regency yayisondela kufuphi noHitler, kodwa ukulwa noNazi kwazisa urhulumente kunye nentukuthelo yaseJamani. Imfazwe yenzeke, kodwa ayiyinto elula njengepro-Axis ngokuchasene ne-Axis, njengomkhomanisi, ubuzwe, ubukhosi, i-fascist kunye nabanye balwa nxamnye nempumelelo yemfazwe.
Amacandelo amathathu awona maqela kwakuyi-fascist u-Utsasha, i- Chetnik yobukhosi kunye ne-Partisans yamaKomanisi.
Njengoko iMfazwe Yehlabathi Yesibili yagqitywa yi-Partisans ekhokelwa nguTito - exhaswa ekupheleni kweeyunithi ze-Red Army - ezavela ekulawuleni, kunye neYugoslavia yesibili yenziwa: le yintlangano yamaphablikhi ayisithupha, elowo kuthiwa lilingana - iCroatia, I-Bosnia ne-Herzegovina, iSerbia, iSlovenia, iMacedonia, neMontenegro - kunye namaphondo amabini alawulayo eSerbia: iKosovo neVojvodina. Emva kokuba imfazwe iphumelele, ukubulawa kwamatye kunye nokuhlengahlengiswa kwabasebenzi kunye nabahlaseli beentshaba.
Umbuso kaTito wawuqala ngokubanzi kunye kunye ne- USSR , kwaye uTito noStalin baxela, kodwa lowo owayesakuba ngumntu wasinda waza wazakhela indlela yakhe, amandla okunika amandla kunye nokufumana uncedo kumandla asentshona. Wayekho, ukuba ayengayithandiyo yonke indawo, ngoko ubuncinane ngethuba elimnandi ngendlela eyaqhubeka ngayo iYugoslavia, kodwa yayincedo lweNtshona-eyenzelwe ukuyiyeka kude neRashiya-mhlawumbi ilondoloze ilizwe. Imbali yezopolitiko yeYudoslavia yesiBili yinto emzabalazo phakathi koorhulumente ophakathi kunye neemfuno zamagunya anikezelweyo kwiiyunithi zamalungu, isenzo sokulinganisela esakhangela imithetho emithathu kunye neenguqu ezininzi kwixesha. Ngethuba lokufa kukaTito, iYugoslavia yayingenangqiqo, kunye neengxaki zezoqoqosho ezinzulu kwaye zazingabonakali zizwe, zonke zihlangene kunye nobuqu bebuntu bukaTito kunye neqela. I-Yugoslavia inokuthi yawa phantsi kwayo yayihleli.
IMfazwe kunye neThathu Yugoslavia
Kulo lonke elawulayo, uTito kwafuneka ahlanganise intlangano kunye nokukhula kobuzwe.
Emva kokufa kwakhe, le mikhosi yaqalisa ukunyuka ngokukhawuleza kwaye yahlula uYugoslavia. Njengoko iSlobodan Milosevic ithatha ulawulo lokuqala kwiSerbia, kwaye umkhosi waseYugoslavia owawunqabileyo, ephupha i-Greater Serbia, iSlovenia neCroatia, yabalisa ukuzimela kwabo ukuba babalekele. Ukuhlaselwa kwezempi zaseYugoslav naseSerbia eSlovenia kwaphumelela ngokukhawuleza, kodwa imfazwe yayidla ngokuphindaphindiwe eCroatia, kwaye ixesha elide lihlala eBosnia emva koko livakalise ukuzimela. Iimfazwe zamagazi, ezizaliswe ukuhlanjululwa kweentlanga, zaziphelile ekupheleni kuka-1995, ezishiya iSerbia neMontenegro njengeRump Yugoslavia. Kwakukho imfazwe kwakhona ngo-1999 njengoko uKosovo ivuselela ukuzimela, kunye notshintsho kubunkokheli ngo-2000, xa uMilosevic ekugqibeleni esususwe emandleni, wabona iYugoslavia ifumana ukwamukelwa kwamanye amazwe ngokubanzi.
IYurophu isaba ukuba i-Montenegrin ifuna ukuzimela ziza kubangela imfazwe entsha, iinkokeli zenze isicwangciso esitsha sesebenzi, okubangele ukutshabalalisa oko kwasala iYugoslavia kunye nokudalwa kweSerbia neMontenegro. Ilizwe liye laphela.
Abantu abalulekileyo beMbali Yugoslavia
UKumkani uAlexander / uAlexander I-1888 - 1934
Wazalelwa kuKumkani waseSerbia, uAlexander wayehlala ebuntwaneni bakhe ebusweni phambi kokuba uSerbia ehamba phambili njenge-regent ngexesha leMfazwe Yehlabathi 1. Wayeyintloko ekumemezeni uBukumkani bamaSerbia, iiCroven, neServenes, waba ngukumkani ngo-1921. Nangona kunjalo, iminyaka ukukhungatheka kwezopolitiko kwamenza wamemezela ulawulo lokunyanzelisa ekuqaleni kwe-1929, ukudala iYugoslavia. Wazama ukubopha amaqela ahlukileyo kwilizwe lakhe kodwa wabulawa xa ehambela eFransi ngo-1934.
UJosp Broz Tito 1892 - 1980
UTito wahokela amaqela olwabukhomanisi eYugoslavia ngexesha leMfazwe Yehlabathi yesi-2 waza wavela njengenkokheli yombutho wesibini weYugoslavia. Wabamba ilizwe kunye kwaye wayephawuleka ngokungafani ne-USSR, eyayilawula ezinye iintlanga zamaKomanisi zaseMpuma Yurophu. Emva kokufa kwakhe, ubuzwe buhlubukisa iYugoslavia.
Indima Yokumemezela eBuddhism
Iintlekele kunye neTearjerkers - I-Top Ten ye-Saddest Plays
I-Dark Out of Martin Luther
I-Keystone College Admissions